नमूना मिनी नेपालको रुपमा विकास गर्छाै | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / नमूना मिनी नेपालको रुपमा विकास गर्छाै
नमूना मिनी नेपालको रुपमा विकास गर्छाै
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता February 7, 2018	0 210 Views
कृष्णध्वज खड्का प्युठान जिल्लाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुनुहुन्छ । विद्यार्थीकालदे खि नै वामपन्थी राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आउनुभएका खड्काले दुई कार्यकाल अ.ने .रा.स् व.वि.यु. को के न्द्रीय अध्यक्षको जिम्मे वारी सम्हाल्नु भएको थियो  । युद्धकालमा राज्यबाट ठूलो यातना सहनुभएका उहा अहिले ने कपा माओ वादी के न्द्रको सचिवालय सदस् य हुनुहुन्छ । उहाँसँग समसामयिक राजनीति, प्रदेश सरकार र प्रदेशको विकास सम्बन्धमा केन्द्रित रहेर हाम्रा सहकर्मी जे .एन. सागरले गरेको कुराकानीको सारसंक्षे प प्रस् तुत गरिएको छ । –सम्पादक
प्रदे शसभा पहिलो बै ठकको अनुभव सुनाउनस्न ?
मुख्यतः दुई तीनवटा एजे ण्डा थिए पहिलो बै ठकमा । हामीले अन्तरिम कार्यविधि पारित ग¥यौ ं । त्यस् तै सभामुखको निर्वाचनका निम्ति मिति तय ग¥यौ ं । प्रदे शसभा ने पालमा पहिलो भएको हुनाले हामीले नौ लो अनुभूति पनि ग¥यौ ं । त्यो नया“ अनुभूतिबीच आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने जिम्मे वारीबो धको कुरा पनि भयो  । सभामा रहे का पा“चवटा दलहरुले संबो धन गरियो र आ–आफना भिजनहरु प्रस् तुत गनेर् काम हामीले ग¥यौ ं ।
सभामुख चयन कहिले ?
फागुन १ गते उम्मे दवारी दिने र २ गते सभामुख चयन गनेर् कार्यक्रम तय गरे का छौ ं भने ४ गते उपसभामुखको निर्वाचन गरिने छ । त्यसपछि सरकार गठन हो ला ।
सभामुख यहाहरुको पार्टीले पाउने हो ला, को हुन्छ ?
वाम गठबन्धनमा रहे का दुई पार्टीबीच मुख्यमन्त्री र सभामुख लिने भन्ने कुरा छ । अब व्यक्ति को हुने भन्ने कुरामा सम्बन्धित पार्टीहरुले नै निर्णय गनेर् छन् । जहा“सम्म सभामुखको कुरा छ हाम्रो पार्टीको निदेर् शनअनुसार संसदीय दलबाट त्यसको पनि टुंगो लगाउ“छांै  । को हुने भन्ने मा अनौ पचारिक छलफल शुरु भएका पनि छन् । तर त्यसको अन्तिम टुंगो हाम्रो पार्टी र संसदीय दलले लगाउने छ । अझै टुंगिएको छै न । सम्भवतः छिट्टै टुंगिन्छ ।
आकांक्षीहरु त हुनुहो ला नि भन्न मिल्दै न र ?
सामान्यतया यो पा“च नम्बर प्रदे श तीनवटा मनो विज्ञानले बने को छ । एउटा लुम्बिनी, अकोर् राप्ती र भे री । त्यसै ले हामीले समग्र प्याके जमा समे ट्नु पर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो  । दलको ने ता को बन्ने , मन्त्री को बन्ने अथवा सभामुख को बन्ने भन्ने यो सबै सन्तुलन मिलाएर जनताका आशा अपे क्षाहरुलाई सम्बो धन गर्न सक्ने ढंगले सन्तुलित निर्णयमा पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा गरे का छौ ं । त्यसै ले गर्दा साथीहरु धे रै हुनुहुन्छ । सबै यो ग्य हुनुहुन्छ । ती मध्ये बाटै छनो ट गरिन्छ । अहिले नै व्यक्ति नभनौ ं ।
धे रै हुनुहुन्छ आकांक्षीहरु ?
धे रै हुनुहुन्छ । तर त्यो खालको चकोर् हानथाप हु“दै न हामीमा । सहमतिमै हुन्छ ।
प्रदे श सरकार कहिले सम्म बन्छ ?
सामान्यतया निर्वाचन आयो गले नतिजा घो षणा गरे को २० दिनभित्र प्रदे श प्रमुखले संसद बो लाउनु पनेर् र संसद बसे को २० दिनभित्र प्रदे श सरकार बनाउने हो  । अथवा निर्वाचन आयो गले नतिजा घो षणा गरे को ३५ दिनभित्र सरकार बनाउने भन्ने हो  । त्यो हिसाबले छिट्टै नै सरकार गठन हुनुपर्छ । फागुनको पहिलो हप्तातिर सरकार बन्नसक्छ ।
मन्त्रीमण्डल कति ठूलो बन्छ ? वाम गठवन्धनको निर्णय लागु हुन्छ त ?
संविधानतः प्रदे श सरकारमा २० प्रतिशतसम्मको मन्त्रिमण्डल बनाउन सकिने व्यवस् था छ । त्यो हु“दा पा“च नम्बर प्रदे शमा १८÷१९ जनासम्मको बनाउन सकिन्छ । तर वाम गठवन्धनले अहिले त्यति ठूलो मन्त्रिमण्डल नबनाउने भने को छ । के न्द्रमा २५ जनासम्मको बनाउने भएपछि त्यसकै हाराहारीमा प्रदे श सरकार बनाउने अवस् था आउनुह“ुदै न भन्ने हो  । त्यसै ले प्रदे शमा १० प्रतिशतसम्मको बनाउने निर्णय अनुसार हाम्रो प्रदे शमा बढीमा ११ जनासम्म बनाएर जाने स् िथति छ । तर त्यसो गर्दा पनि मै ले माथि भने जस् तो यो प्रदे शको तीनवटा मनो विज्ञानलाई समे ट्ने र यहा“को जनतालाई आश्वस् त पानेर् हिसावले अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने लागे को छ । मानांै मुख्यमन्त्रीपछि क्षे त्रीय, जातीय, भूगो लको सन्तुलन मिलाएर मन्त्रिमण्डल विस् तार गरे राम्रो हुन्छ भन्ने हिसावले हाम्रो पार्टीले छलफल गरिरहे को छ ।
तपाइको आकांक्षा के हो ?
पहिलो त वाम गठवन्धनले टुंग्याउनु प¥यो यो विषय । त्यसपछि हाम्रो पार्टीले टुंग्याउनुप¥यो र पार्टीले गरे को दिशा निदेर् शअनुसार संसदीय दलले यसको टुंगो लगाउ“छ । त्यसले गर्दा अहिले सम्मको आन्दो लनमा म निरन्तर लागिरहे कै छु । त्यसले गर्दा पार्टीले दिने जस् तो सुकै जिम्मे वारी र भूमिका निर्वाह गर्न म तयार छु ।
भूमिका त आएकै छ नि कति धे रै कानून निर्माण गर्नुपनेर् छ हो इन र ?
प्रदे श भने को अहिले को अवस् थामा जिरो छ । के न्द्रमा पनि एउटा सो च, संरचना छ, स् थानीय तहमा पनि हिजो का स् थानीय निकायका के ही संरचना र सो च छन् र अभ्यास पनि छ । तर प्रदे श नितान्त नया“ संरचना हो  । यो आफै मा नया“ छ । अकोर् कुरा संविधानले पनि ओ रे न्टे शन गरे को छ । त्यही परिधिमा रहे र कानून निर्माण र अधिकारका विषयहरु छन् त्यसका लागि पनि के न्द्रसग र स् थानीय तह गरी दुबै स“ग समन्वय गरे र बनाउनुपनेर् यसको ठूलो जिम्मे वारी छ । हाम्रा जुन तीन तह छन् यी तीन तह एकअर्काको मातहतमा छै नन् । यी आफै मा स् वायत्त छन् र समानान्तरजस् तै पनि छन् । यसले गर्दा यहा“ अधिकारको छिनाझप्टी पनेर् जस् तो पनि दे खिन्छ । त्यसले गर्दा हामीले धे रै सुझबुझका साथ संघीयताको मुल मर्म र भावनाअनुसार प्रदे शलाई समृद्ध र सक्षम बनाउनका निम्ति आवश्यक नीति बनाउ“दै अघि बढ्ने काम गर्नुपर्ने छ । यसको निम्ति बनिबनाउ के ही छै न । जस् तो अहिले संसद चल्नलाई पहिले कार्यविधि बनायो र संसद चल्यो  । अब फे रि संसदको नियमावली बनाउनुपनेर् छ । सबै आफै बनाउनुपनेर् भएकाले हामीले गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुपनेर् छ । किनकि प्रदे शको पहिलो संसद पनि भयो  । भविष्य कस् तो बनाउने भन्ने जिम्मे वारी हाम्रो हातमा आएको छ । त्यो जिम्मे वारी गम्भीरतापूर्वक निर्वाह गछौर् ं ।
स्रो त पनि नया खो ज्नुपनेर् हो ला ?
पहिलो चरणमै भएकाले अहिले त के न्द्र सरकारले अनुदानको रुपमा हे र्नुपनेर् हुन्छ । तर संघीयता भन्ने बित्तिकै यो संरचना आफै आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । त्यसले गर्दा यहा“का प्राकृतिक स्रो तहरु जे छन् ती कुराहरुलाई नै अधिकतम सदुपयो ग गर्नुपर्छ । परिचालन गर्नुपर्छ । दे शको पू“जी बृद्धिका लागि सबै क्षे त्रलाई आधुनिकीकरण, औ द्यो गिकीकरण गर्नुपर्छ । यस् ता कुरालाई अघि नबढाइकन, हाम्रा स्रो त साधनहरुको अधिकतम दो हन नगरिकन हामी आत्मनिर्भर हुने स् िथति दे खिन्न । मुख्य कुरा दे शकै समस् याको रुपमा रहे को भ्रष्टाचारलाई रो क्नुपर्छ । भ्रष्टाचारलाई मात्रै निर्मूल गरे र काम गर्न सकियो भने पू“जीका लागि प्रदे शलाई त्यति ठूलो समस् या भइहाल्छ जस् तो मलाई लाग्दै न । तर त्यसको निम्ति हाम्रो साझा संकल्प चाहिन्छ । अठो ट चाहियो  । के ही गर्छु भन्ने हुनुप¥यो र जनताले बामपन्थीहरुको सरकारस“ग ठूलो अपे क्षा पनि गरे का छन् । हामी नया युगमा प्रवे श गरे का छौ ं र नया“ढंगले अघि बढ्ने काम पनि गर्नुपर्छ । हामी बदलिनु पनि पर्छ । त्यसै ले नया“ संकल्प गरे र जाने हो भने यी सवै समस् या हल गर्न सकिन्छ ।
स्रो त बाडफाडको चुनौ ती पनि ठूलै छ नि ?
अहिले चाहि“ मो टामो टीरुपमा संविधानले नै निर्धारण गरिसके को छ । अनुसूची ५, ६ र ७ मा के न्द्र, प्रदे श र स् थानीय तहका अधिकारहरुका विषयमा । ती निर्धारित अधिकारलाई नै हामीले आवश्यक नियम, ऐ न, कानून बनाएर त्यसलाई व्यवस् िथत गर्नुपनेर् छ । त्यो छुट्याइएको अधिकारअनुसार चाहि“ पर्यटनको कुरा छ । जस् तो लुम्बिनीलाई संसारभर फै लाएर हामीले आयआर्जन गर्न सक्छौ ं । लुम्बिनी, धारापानी, स् वर्गद्वारी, मुक्तिनाथसम्म जो ड्न सक्छौ ं । त्यस् तै सिस् ने हिमाल र ढो रपाटनलाई जो ड्न सक्छांै  । नदीनालाका कुरा गर्दा राप्तीका थुप्रै त्यस् ता जलाधारहरु छन् । ने पालगञ्ज, दाङ, बुटवल, भै रहवाजस् ता औ द्यो गिक क्षे त्रको रुपमा विकास भइरहे का छन् । त्यस् तै शिक्षा, स् वास् थ्य र उत्पादनलाई पनि यहा“ जो ड्न सकिन्छ । कृषि उत्पादनलाई वै ज्ञानिक र व्यवसायीकरण गर्न सक्यौ ं भने त्यो समस् या रह“दै न । हामीस“ग उर्वर भूमि छ । को इलाबासदे खि सिस् ने हिमालसम्म मिनी ने पालको खाका पा“च नम्बर प्रदे श दे खिन्छ । हिमाल छ, पहाड छ र मधे श पनि छ । सबै धर्म, जाति, भाषा र संस् कृति पनि छ । प्राकृतिक स्रो त साधनले पनि सम्पन्न छ । उत्तर र दक्षिणतर्फ दुबै दे शका बो र्डरले पनि जो डे को छ । पुरानो राज्य सञ्चालन गरे का ऐ तिहासिक संरचनाहरु पनि छन् । पाल्पाको दरवार, प्युठान, दाङ तथा सल्यानका कुरा गर्नुस् पूर्खाहरुले आफै मा आत्मनिर्भर भएर यहा“ राज्य चलाएका थिए । इतिहास हे र्दा आत्मनिर्भर भएको अवस् था छ । त्यसै ले यो पा“च नम्वर प्रदे शलाई सम्पन्न र नमूना प्रदे श बनाउन सक्छांै भन्ने लाग्छ ।
अस्थायी मुकामका विषयमा बिरो धका स् वरहरुलाई कसरी सम्बो धन गर्नुहुन्छ ?
राज्यपुनर्संरचना आयो ग जुन सरकारले बनायो त्यसले दाङ भने र सिफारिस गरे को छ । पछि अध्ययन कार्यदल आयो । त्यसले पनि दाङ भने र सिफारिस गरे को छ । त्यो सिफारिस गनेर् उनीहरुले आधारहरु हे रे का थिए । भूगो लको हिसाबले , जनसंख्याको हिसावले , भौ तिक पूर्वाधारको हिसाबले र जनतालाई सुगम हुने हिसाबले सबै हिसाबले नै आधार बनाएर पा“च नम्वर प्रदे शको मुकाम दाङ भने र सिफारिस गरे का हुन् । त्यो नै न्यायो चित, उपयुक्त हो  । सरकारले त्यही तथ्यमा रहे र निर्णय गर्नुपथ्योर्  । तर यो सरकारले अत्यन्त गै रजिम्मे वारी ढंगले अकैर् निर्णय ग¥यो  । जुन निर्णय न्यायो चित छै न । यो निर्णय यदि कार्यान्वयनमा जाने हो भने पा“च नं. प्रदे श अहिले को अवस् थामा रहन्छ भन्न सकिदै न । विकल्पबिना एकातिर हामीले पा“च नम्वर प्रदे शलाई सम्पन्न बनाउने भन्दै छौ ं । अकोर् तिर झिनामसिना कुराहरुलाई विवादमा आएर यो मनो विज्ञान बा“डियो भने यो प्रदे शको समृद्धि सम्भव छै न र टिक्न पनि सक्दै न । पा“च नम्बर प्रदे श यथास् थानमा रहन नसक्नु भने को आर्थिक, सामाजिक, सांस् कृतिक सबै हिसावबाट यो अझै पछि धके लिने हो  । त्यसकारण हामीले त्यो स् िथतिमा सबै जनतालाई पायक पनेर् , सुगम पनेर् र संघीयताको मर्म र भावनाअनुसार त्यसको अभ्यास गर्न सकिने ठाउ“लाई नै हामीले स् थायी मुकाम तो क्नुपर्छ । तसर्थ सबै पार्टीका सांसदहरु जिम्मे वार हुनुहुन्छ । राजनीतिक पार्टीका ने ताहरु पनि जिम्मे वार हुनुहुन्छ र उहा“हरुले यो सबै समस् यालाई समझदारीबाट हल गरिने छ । यसलाई जतिसक्यो छिटो हल गछौर् ं पा“च नम्बर प्रदे शलाई उति राम्रो हुन्छ । नत्र भने अनावश्यकढंगले बल्झिनुपनेर् हुन्छ । त्यसले क्षति पु¥याउ“छ । त्यसै ले गर्दा मै ले शुरुदे खि नै एउटा कुनामा राखिएको मुकाम न्यायपूर्ण छै न । यो संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत छ । यो गलत हो  । त्यसै ले अब न्यायपूर्ण निर्णय हुनुपर्छ । खुलाढंगले छलफल गरिनुपर्छ । ने ताहरु र पा“च नम्बर प्रदे शको संसदले पनि छलफल गर्नुपर्छ र उपयुक्त निर्णयमा पुग्नुपर्छ । सबै पार्टीका सांसदहरुस“ग अनौ पचारिक छलफल पनि भइरहे को छ । पायक पनेर् ठाउ“ रुपन्दे ही नै हो भन्ने कुरा त कसै ले पनि भन्न सक्दै न, भन्नु भएको पनि छै न । कसै ले पनि भन्न सक्दै न । अब बनाउने के न्द्र भने को भावी पुस् ताका निम्ति हो  । आफै मा विकास भएका ठाउ“हरु त छ“दै छन् नि । नया परिकल्पनासहितको शहर विकास गर्न सक्ने ठाउ“हरुलाई अबको के न्द्रको रुपमा विकास गर्नुपर्छ ।
प्रदे शको समग्र विकास र समृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ ?
पहिलो कुरा राष्ट्रिय गौ रवका आयो जनाहरु जस् तो जलविद्युत, खानी उत्खनन् हो ला, राजमार्गका कुराहरु हो लान् । अकोर् कुरा हाम्रो प्रदे शमा अझै पूर्वाधार विकासकै कुरालाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । यो प्रदे शभित्रका १२ जिल्लाहरुको सडक सञ्जाल निर्माण गनेर् , कालो पत्रे गरे र एकअकोर् जिल्लामा स्रो त साधनको परिचालन गर्न सकियो भने समृद्धि सम्भव छ । अकोर् कुरा अहिले पनि हामीले निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली अपनाएका छांै  । जतिसक्यो चॉ“डो आधुनिकीकरण, वै ज्ञानिकिकरण गरे र व्यवसायीकरण गर्न जरुरी छ ।
यसलाई व्यवसायीकरण गर्न बित्तिकै हाम्रो पहाडको घनावस्ती छ त्यसलाई व्यवस् िथत गर्न सक्छांै  । त्यो वस्ती विकासले शिक्षा, स् वास् थ्य, सञ्चार, सिंचाई, खाने पानीलगायतका यावत कुरालाई व्यवस् िथत गर्न सक्छौ ं । तर हाम्रो उत्पादन प्रणालीलाई नबदलिकन वस् ती विकास कार्यक्रम लागु गर्न सक्दै नांै  । त्यस कारणले हामी आधुनिकीकरणतर्फ जानुपर्छ ।
पाच वर्षभित्र यी सबै गर्न सकिन्छ ?
औ सतमा वाम गठबन्धनको प्रतिबद्धता पनि आएकै छ । पा“च वर्षमा अहिले को आयस् तरलाई दो ब्बर बनाएर मध्यमस् तरको जीवनस् तरमा नागरिकलाई पु¥याउने
प्रतिबद्धता छ । शिक्षा, स् वास् थ्य, सामाजिक सुरक्षामा पनि सो ही अनुसारको स् तरबृद्धि गनेर् कुरा पनि । वाम एकता हुन्छ । नया युगमा नया ढंगले हामीले काम गछौर् ं र
हामीले पाच÷दश वर्षमा त्यो समृद्धि हासिल गछौर् ं भन्ने कुरा प्रतिबद्धता गरे का छौ ं । त्यो सो चका आधारमा अघि बढ्ने हो भने त्यो हासिल गर्न सकिन्छ । जनताले दे ख्ने र महसुस गनेर् गरी काम हुन्छ । तर त्यो व्याहारिकरुपमा काममा हामी जान सक्नुपर्छ ।
Previous: सुषमाको स्वागतबाट समृद्धिको शुरुवात !
Next: पाँच करोड लगानीमा ह्याचरी उद्योग